विष साबित हुन सक्छ यी ५ चिज, भुलेर पनि प्रयोग नगरौं – Himalaya TV
Home » समाचार » विष साबित हुन सक्छ यी ५ चिज, भुलेर पनि प्रयोग नगरौं
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:२८
हामी भान्छामा कतिपय खानेकुरा र मसलाजन्य चिजहरू राखिरहेका हुन्छौं जुन राम्रोसँग ध्यान नपुर्याउने हो भने स्वास्थ्यको लागि घातक साबित हुन सक्छ । यी चिजहरू भान्छामा राख्दै हुनुहुन्छ भने समयमै ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र यसले स्वास्थ्यलार्इ गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ ।
अालुलार्इ तरकारीको राजा पनि मानिन्छ । धेरैजसो मानिसलार्इ मन पर्ने तरकारी अन्तर्गत पर्दछ अालु । तर के तपाइँलार्इ थाहा छ केही दिन भान्छाकोठामा राखेको अालु उम्रिन सक्छ जुन हाम्रो स्वास्थ्यलार्इ गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । त्यसैले टुसा उम्रेको अालु नखाअौं ।
प्राय मानिसहरू शुद्ध महको चक्करमा माहुरीको चाकासहितको मह किन्दछन् । तर यो हाम्रो लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ । यसमा पाइने स-साना किरा वा जीवले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसको सेवनले उल्टी अाउने, रिंगटा लाग्ने जस्ता कैयौं समस्या देखापर्न सक्छ ।
भनिन्छ बदाम खानाले दिमाग तेजिलो हुन्छ । यसको अलावा बदामका कैयौं फाइदाको बारेमा बताइन्छ । तर भान्छाकोठामा राख्दाराख्दै कहिलेकाहीं बदाम सड्न जान्छ र यो तितो वा टर्रो स्वादको हुनजान्छ । यस्तो स्वाद बिग्रेको बदाममा हाइड्रोजन साइनाइडको मात्रा बढ्न जान्छ जुन खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन ।
कतिपय फलफूलको बीउ (जस्तोकि स्याउ, चेरी, अालुबखडा, नासपाती, अारू अादि)को सेवन गर्नु हुँदैन, किनकि यसमा पनि हाइड्रोजन साइनाइडको मात्रा धेरै हुन्छ । यसलार्इ चपाउन वा खान नहुने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
घरमा जाइफलको प्रयोग मसलाको रूपमा भइरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसको प्रयोग अौषधिको रूपमा पनि गरिन्छ । जाइफल धेरै खाइयो भने हृदयघात, नशामा कमजोरी, हाइपोथर्मिया, छटपटी अादि समस्याको खतरा रहने गर्दछ ।
यो पनि पढौं-
विवाहपछि महिलाहरुकाे शरीर किन बदलिन्छ ? यस्ता छन ८ कारण
जाडोमा स्वाद फेर्न यस्तो खाने कि ?
किन हुन्छ हृदयाघात ? कारण, लक्षण र बच्ने उपाए
के तपाइँ ग्यास्ट्रिकबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ ? घरमै गर्नुहोस् सजिलो उपचार
थाहा पाइराख्नोस् सानो ल्वाङको १४ ठूला फाइदाहरू
भुइँमा सुत्नुको फाइदाहरू जानौं, कम्मर दुखाइदेखि अरु धेरै समस्या हटाऔं
यस्ता छन् चियाका पाँच बेफाइदाहरू
जानी राख्नुहोस् पुदिनाको पाँच अद्भूत फाइदाहरूको बारेमा
घाम ताप्दा यस्ता हुन्छन फाईदा